192.168.0.1 व्यवस्थापक लगिन & Router Setup Guide 【2019】
कसरी लग इन 192.168.0.1? को रूटर पासवर्ड र कन्फिगरेसन कसरी रिसेट गर्न मा चरण गाइड एक चरण
मा चरण पुस्तिका यस चरणमा कसरी को व्यवस्थापक प्यानल लगइन गर्न 192.168.0.1, हामी प्रत्येक चरण र निर्देशन मा एक नजर हुनेछ.
तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ के छ 192.168.0.1? तथापि, यदि तपाईंलाई थाहा छैन. गरेको यो द्रुत नजर होस्.
आईपी ​​ठेगाना के हो 192.168.0.1?
सामान्य रूपमा, आईपी ​​ठेगाना 192.168.0.1 पूर्वनिर्धारित आईपी डी-लिङ्क जस्तै ब्रोडब्यान्ड routers अधिकांश द्वारा प्रयोग गरिन्छ छ, Netgear, etc for the intent of configuring routers.
जस्तै केही अन्य ठेगाना 192.168.2.1 र 192.168.1.1 पनि routers अन्य ब्रान्डहरु प्रयोग गरिन्छ. पनि, केवल एक विशेष IP ठेगाना नेटवर्क जडान जो एक एकल उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ.
राउटर सेटिङहरूमा लागि, 192.168.0.1 छ एक साधारण IP ठेगाना जो धेरै हार्डवेयर निर्माताहरु आफ्नो routers 'पूर्वनिर्धारित आईपी ठेगाना रूपमा प्रयोग गरिएको छ, तर प्रयोगकर्ताहरूले नियन्त्रण प्यानल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रतिस्थापन गर्न, जस्तै 192.168.1.1.
सामान्यतया, यो IP ठेगानामा पासवर्ड सेटिङ आधारमा भिन्न राउटर निर्माता द्वारा, तर सामान्यतः तिनीहरू:
प्रयोगकर्ता नाम (केस संवेदनशील): व्यवस्थापक
तपाईं राउटर को पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभएको छ भने त तपाईं बदल पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्. मामला मा तपाईं पासवर्ड भूल गए, त्यसपछि तपाईं पूर्वनिर्धारित पासवर्ड प्राप्त गर्न रूटर रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ रूपमा चिन्ता गर्न आवश्यक छैन छ.
साधारणतया, राउटर सेटिङहरू राउटर को पीठ मा उल्लेख गरिएका छन्, जो IP ठेगाना समावेश, पूर्वनिर्धारित लग इन प्रयोगकर्ता नाम, र राउटर को पासवर्ड. तिनीहरूले पनि लेबल केही मा राउटर सिरियल नम्बर रेकर्ड. तपाईं त्यहाँ तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि बस राउटर गरेको मार्गदर्शन पुस्तिका मा एक नजर.
धेरै अवस्थामा दुई उपकरणहरू जहाँ एक आईपी प्रयोग गर्न खोज्नु (जस्तै 192.168.0.1), आईपी ​​द्वन्द्व भनिने समस्या हुन्छ र प्रयोगकर्ता या 'कम्प्युटर नेटवर्क जडान गर्न असफल भएमा' 'उपकरण इन्टरनेटमा ब्राउजर मार्फत जडान गर्न असफल भएको छ' जस्तै त्रुटि सन्देश सामना गर्न छ.
लगइन गर्न असमर्थ 192.168.0.1 तपाईंको रूटर को आईपी ठेगाना?
मा लगइन गर्न असमर्थ 192.168.0.1 एक साधारण मुद्दा सामना छ जबकि राउटर को प्रशासन प्यानलमा लग इन, त्यहाँ धेरै कारण हुन सक्छ, सम्भवतः, आफ्नो राउटर प्रशासन IP ठेगाना छैन 192.168.0.1, आदि. यहाँ हामी यो मुद्दा गर्न साधारण समाधान केही तपाईं देखाउन.
चरण 1: यस्तो अवस्थामा, पहिलो चरण इन्टरनेट रूटर वा साझा छ कि छैन मान्य छ. यदि हो, त्यसपछि तपाईं IP ठेगाना प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ 192.168.0.1 आफ्नो राउटर गरेर हो भने र निश्चित पूर्व-कन्फिगर. साधारणतया विवरण राउटर गरेको मार्गदर्शन पुस्तिका मा लेखिएका छन्.
पनि मामला मा, तपाईं राउटर गरेको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड थाहा छैन, तपाईं मार्गदर्शन मा जाँच गर्नुहोस् वा बस खोज इन्जिन मा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ. पनि, को मा दिइएको ज्यादातर राउटर आईडी पासवर्ड आफ्नो राउटर को पीठ. दयालु राउटर आईडी र पासवर्ड पूर्वनिर्धारित दिइएको छ जसको लागि एक पटक जाँच.
तपाईं छवि तल जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, म कसरी तपाईँले सजिलै आफ्नो राउटर व्यवस्थापक र पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ व्याख्या गर्न आफैलाई लिएका छन्.
तिनीहरूले सामान्यतया 'व्यवस्थापक' हो, 'अतिथि', यस्ता केही तरिका. यदि, पासवर्ड परिवर्तन, त्यसपछि सबै भन्दा राम्रो सुझाव रूटर को बंदरगाहों छेउमा एउटा सानो प्वाल थिचेर राउटर रिसेट छ.
सुझाव: ध्यान दिएर यो पत्ता लगाउन र तपाईँले लागि प्वाल लीन एक दांत कोट्याउने सिन्का प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 10 रूटर पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू रिसेट गर्न सेकेन्ड.
चरण 2: पिङ आईपी 192.168.0.1. पहिले, आफ्नो डेस्कटप को बायाँ कुनामा कार्यपट्टी क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि 'रन ...' मा क्लिक गर्नुहोस्, वा प्रेस 'विन्डोज किबोर्डमा बटन + आर '. पप-अप सञ्झ्याल मा, तपाईं cmd ​​'टाइप गर्न, त्यसपछि 'पिंग 192.168.0.1' प्रविष्ट पप-अप विन्डोमा, बस त्यहाँ पिंग र बीच एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने सम्झना 192.168.0.1.
त्यसपछि परिणाम लागि प्रतीक्षा, विन्डो देखाउँछ भने तपाईं 'अनुरोध टाइम आउट', यसलाई आफ्नो कम्प्युटर सफलतापूर्वक आफ्नो राउटर जोडिएको छ छैन मतलब र 'बाट जवाफ यो देखाउँछ भने 192.168.0.1: बाइट = 32 .. ', त्यसपछि, बधाई! नेटवर्क राम्ररी चलिरहेको छ.
के यो 'बाहिर अनुरोध समय' देखाउँछ भने?
पहिले, को कि जाँच केबल रेखाहरू ठीक डेस्कटप जडान भएका छन्. म जो माथि बुझ्न सजिलो छ जो तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ मेरो राउटर को फोटो लिएका छन्.
त्यसपछि रेखा सही ढंगले राउटर को सही बंदरगाहों प्लग छन् जाँच. यो 'Wan'पोर्ट इन्टरनेट केबल आफ्नो नेटवर्क प्रदायकबाट आउँदै छ कि संग जोड्नु पर्छ.
आफ्नो कम्प्युटर को आईपी ठेगाना राम्ररी वा कन्फिगर गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच. त्यसको लागि,
दायाँ क्लिक गर्नुहोस् 'मेरो नेटवर्क स्थान'र त्यसपछि'गुण',
मा दायाँ बटन क्लिक गर्नुहोस् 'स्थानीय क्षेत्र जडान'र त्यसपछि'गुण',
क्लिक गर्नुहोस् 'इन्टरनेट प्रोटोकल(TCP / IP) र त्यसपछि 'गुण'.
तपाईं प्रवेश IP ठेगाना सही छ कि छैन भनेर जाँच वा यसलाई छोड्न 'IP ठेगाना स्वतः प्राप्त'.
तपाईं यदि सबै कदम ठीक कन्फिगर छन् सफलतापूर्वक आफ्नो राउटर पिङ गर्न सक्नुहुन्छ.
कसरी सेटअप तपाईंको वायरलेस राउटर?
पहिले, आफ्नो ब्राउजर खोल्न र प्रविष्ट गर्नुहोस् http://192.168.0.1,र निश्चित यो www.192.168.0.1 वा 192.168.o.1 भने बटन तल तपाईं अझै पनि भ्रमित क्लिक.
त्यसपछि एक संवाद बक्स पप-अप प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड लागि सोधेर, पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्.
त्यसपछि राउटर सेटिङ प्यानल तपाईं देखाइने, एउटा सेटअप विजार्ड फरक कन्फिगरेसन सेट गर्न नेतृत्व गर्नेछन् जो सधैं त्यहाँ.
इन्टरनेटमा विकल्प कन्फिगर समयमा, PPPoE चयन (डीएसएल भर्चुअल डायल-अप), र यो खाता प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड तपाईं आफ्नो नेटवर्क सेवा प्रदायक प्राप्त जसको लागि तपाईं माग्छ. फाराम मा विवरण भर्न र डाटा सुरक्षित, त्यसपछि आफ्नो नेटवर्क सजिलै काम सुरु गर्नुपर्छ.
अन्तिम चरणमा, तपाईं आफ्नो वाईफाई लागि बलियो पासवर्ड सेट अप गर्न आवश्यक, जो आफ्नो वायरलेस राउटर सार्वजनिक निःशुल्क वाईफाई प्रदायक हुनेछैन भनी पक्का हुनेछ.
कसरी परिवर्तन गर्न रूटर वाइफाइ पासवर्ड प्रयोग 192.168.0.1 व्यवस्थापक प्यानल
यसलाई अनावश्यक पहुँच सार्वजनिक नगर्न तपाईँको जडान सुरक्षित हुनेछ जो आफ्नो राउटर पासवर्ड सुरक्षित गर्न आवश्यक छ.
तपाईं चाहनुहुन्छ भने परिवर्तन वा तपाईंको वाइफाइ राउटर पासवर्ड सुरक्षित आईपी ​​ठेगाना प्रयोग 192.168.0.1 त्यसपछि स्क्रिनसट सहित तल दिइएको कदम पालना.
आफ्नो राउटर को आईपी ठेगाना प्रयोग गरेर आफ्नो प्रशासन प्यानलमा पहिलो लग इन 192.168.0.1
तपाईंको प्रशासन प्यानलमा लग इन गरेपछि व्यवस्थापक प्यानल पुनः निर्देशित हुनेछ त्यसको क्लिक गर्नुहोस् वायरलेस विकल्प.
यसमा क्लिक गरेपछि अर्को क्लिक गर्नुहोस् wireless setting.
तल देखाइएको जब तपाईं आफ्नो व्यवस्थापक प्यानल देखि वायरलेस सेटिङ मा क्लिक तपाईं व्यवस्थापक प्यानल देख्ने.
यो व्यवस्थापक प्यानल मा सेट तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वर्तमान पासवर्ड.
प्रकार राख्न तर पासवर्ड टाइप अघि चाहनुहुन्छ जो पासवर्ड आफ्नो आफ्नो सुरक्षित बनाउन र तपाईंले यसलाई सम्झना छ.
माथि स्क्रिनसट मा देखाइएको पछि बचत बटन मा आफ्नो नयाँ पासवर्ड क्लिक गर्नुहोस्. अब तपाईं सफलतापूर्वक आफ्नो राउटर पासवर्ड परिवर्तन गरेका छन्.
192.168.0.1 निजी IP ठेगाना को छ, आफूलाई एक नेटवर्कमा पहिचान गर्न विभिन्न routers द्वारा प्रयोग गरिन्छ कि.
तपाईं एक राउटर छ भने त्यो प्रयोग 192.168.0.1 आईपी ​​ठेगाना र यसको लगइन प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड थाहा, तपाईंलाई लग आफ्नो वेब ब्राउजर को URL क्षेत्र मा यो IP ठेगाना टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, र प्रति आफ्नो आवश्यकता कुनै पनि राउटर सेटिङ परिवर्तन.